Vavaka sy hira : Nampihetsi-po sy nanainga fanahy ny sehon’i Rija Rasolondraibe -
AccueilVaovao SamihafaVavaka sy hira : Nampihetsi-po sy nanainga fanahy ny sehon’i Rija Rasolondraibe
11/05/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Mpanakanto amin’ny hira fiderana manana ny lazany any ivelany. Mandalo an-tanindrazana ary nisantatra ireo seho maromaro ataony i Rija Rasolondraibe, omaly. « Ao ary Tsika e ! » no lohatenin’ny fampisehoana entiny izay nosantarina tetsy amin’ny Lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina. Nampihetsi-po sy nanainga fanahy ireo mpijery tonga maro ny fampisehoana. Toa ny fanaony rehefa mandalo toa izao dia mitondra hatrany hira fiderana vaovao ity mpanakanto ity, ka anisan’ireo hiaka farany nentiny nefa efa hain’ny mpankafy sahady ny « Tontolo andro », « Mahery aho »… Tsy hohadinoina koa anefa ireo hira efa nahafantarana azy taloha, izay nisintonany ny ampahany tena ankafizin’ny mpijery, ary niarahany nikalo tamin’izy ireo rahateo. « Tsy ho ampy ny fotoana raha ny hamaroan’ny hiran’i Rija Rasolondraibe, fa nezahina natao ireo tena be mpankafy », araka ny fanazavan’ny mpikarakara. « Faly indray miaraka aminareo hanindrahindra ny Tompo », hoy kosa i Rija Rasolondraibe raha nifanatri-tava tamin’ireo mpankafy azy tetsy Mahamasina.
Toa ny mahazatra an’i Rija Rasolondraibe rehefa mandalo an-tanindrazana toa izao, dia ireo mpihira sy mpitendry eto an-toerana no niara-dia taminy. « Manampy betsaka amin’ny fanomanana sy ny famerenana ny teknolojia, ka ny fampiarahana izany sisa no atao rehefa eto an-toerana izy », hoy hatrany ny mpikarakara raha niresaka iny seho iny, sy izay mbola hataony.
Aorian’ny etsy Mahamasina, dia efa misy ireo fandaharam-potoana hafa atrehin’i Rija Rasolondraibe amin’izao fandalovany izao. Anisan’ny ao anatin’ny fandaharam-potoanany ny any Fianarantsoa ny alahady 13 may izao manomboka amin’ny 5 ora hariva ao amin’ny Zomatel.